ရန်ပိုင်| January 3, 2013 | Hits:2,696
မသန်စွမ်းများ တန်းတူ ပညာသင်ကြားခွင့်ရရှိရေး ဆွေးနွေးလူတိုင်းအကျုံးဝင် ပညာရေးစနစ်နှင့် မသန်စွမ်းများ တန်းတူပညာသင်ခွင့် ဆွေးနွေးမည်အမျိုးသမီးများအပေါ် ကျောင်းများက ခွဲခြားကန့်သတ်နေမှုများ ရပ်သင့်ပြီကန့်သတ် ချုပ်ချယ်မှုတွေကြောင့် အဝေဖန်ခံနေရတဲ့ ပညာရေး ဥပဒေမူကြမ်းကျောင်းသား သမဂ္ဂတွေ ပြင်စရာရှိတာ ပြင်ဖို့လိုပြီ
minn thant January 3, 2013 - 6:56 pm Despite he served asaeducation minister in last BSPP era, I respect him because of one major historical thing in RASU,’s 10th yr anniversary magazine of U Thant in 1984,which he signed then he was transffered to Myintgyina.
Reply U Thi Ha Tint Swe January 4, 2013 - 11:26 am we’re very sad on Dr.Kyaw Sein’s death on Jan,3rd,2013 because he was our professor for Psy-dept of RASU & Workers’ College,Botataung,Rgn,Burma since 1972 to 1977 and he is Psychological talent on Psycho-analysis but Dr.Nyi Win Mhan is Psychological talent on Psycho-behaviourism once uponatime! he said that he liked more Psychologist than Minister and then,Dr.Kyaw Sein accepted the position of Educational minister of Ma-Sa-La and since that moment,his portrait slowly disappeared among Psychologists!